Bad News For All Zimbabweans living in SA Concerning their Permits / See here - Opera News
Due to the economic situation in Zimbabwe many Zimbabweans have fled from their country to other countries .Records have proven that Zimbabwe is the second country in Africa with most of its citizens living outside the country. The first being Nigeria of course .Zimbabweans are mainly based in South Africa , Botswana and United Kingdom .
South Africa is holding millions of Zimbabweans both documented and undocumented .But not for long because it looks like their time is up .The Government has rejected offers from healthcare workers from Zim who want to come work in SA .
Also it has revealed that it won't be renewing permits .This will leave millions of Zimbabweans With no choice but to go back home .
Of course South Africans were happy about this since they do not like Zimbabweans who are here .They claim that they take their jobs and are flooding their healthcare system.Many Zimbabweans have made it clear that they are not going back to their country .
So all Zimbabweans who are in South Africa must prepare to be deported as soon as their permits expire .At least now they can go back home and fight for their country instead of always running away .
And then again this could be another stunt by the ANC to convince South Africans that they are putting them first so they could get votes. After elections are over they will give Zimbabweans permits.This is what happens every 4 years .
Bad News For All Zimbabweans Nigeria SA South Africa Zimbabwe